Machine fanasan-damba ao amin'ny efitra fandroana - Tombontsoa sy ny fatiantoka | Bezzia
Ny milina fanasan-damba ao amin'ny efitra fandroana: ny tombony sy ny tsy fahampiana
Susana godoy | 23/06/2022 14:00 | Decor
Ny milina fanasan-damba ao amin'ny efitra fandroana dia mety ho mahazatra kokoa noho ny eritreretintsika. Satria marina fa maro ny olona manana izany ao an-dakozia na any amin'ny toerana fanampiny, saingy tsy dia mahita toerana be loatra ao an-trano isika. Noho izany, misy tranga maro izay nanapa-kevitra ny hametraka ny milina fanasan-damba ao amin'ny efitra fandroana.
angamba Ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaina dia ny olana momba ny fiarovana elektrika., fa raha matoky matihanina isika dia tsy misy tokony hatahorantsika. Ho hitantsika izao ny tombony ananany nefa koa ny tsy fahampiana satria mahazatra antsika ny mahita ny lafiny roa amin'ny vola madinika iray.
1 Ny tombony amin'ny fananana milina fanasan-damba ao amin'ny efitra fandroana
2 Ny tsy fahampian'ny milina fanasan-damba ao amin'ny efitra fandroana
Ny tombony amin'ny fananana milina fanasan-damba ao amin'ny efitra fandroana
Ny milina fanasan-damba dia iray amin'ireo fitaovana ilaina. Noho izany antony izany dia mety hanahirana antsika ny mahafantatra ny toerana hametrahana azy, noho ny haben'izy ireo matetika sy ny metatra vitsivitsy amin'ny gorodona amin'ny ankapobeny. Raha toa ka hevitra tsara aminao ny fananana milina fanasan-damba ao amin'ny efitra fandroana, dia avelanay aminao ny tombony azony mba handresena lahatra anao bebe kokoa momba izany.
Mampahazo aina kokoa rehefa mampiasa azy: Satria raha ny lojika dia handeha mivantana any ny akanjo, tsy mila mandeha amin'ny siny na manerana ny trano. Ho tavela ihany koa ireo akanjo maloto nariana teo amin’ny gorodon’ny efitra fandroana. Hatramin'izao dia tsy misy fialan-tsiny amin'ny tsy fametrahana azy amin'ny toerany.
Raha manana ny milina fanasan-damba ao an-dakozia ianao, dia izao dia hanana toerana bebe kokoa ianao ao aminy. Satria marina fa mandany ora maro ao an-dakozia isika ary tena ilaina foana ny manana toerana hanaovana ny asa andavanandro. Ny lavaka amin'ny milina fanasan-damba dia afaka manampy anao hametraka kabinetra ary noho izany dia ho toerana tsara indrindra ho an'ny fitahirizana.
Tsy ilaina ny fametrahana fanampiny satria na ny fivoahan'ny herinaratra na ny fivoahan'ny rano dia ho hita ao amin'ny efitra fandroana koa. Noho izany, ny fametrahana azy dia tsy midika karazana olana na fanavaozana.
Ny tsy fahampian'ny milina fanasan-damba ao amin'ny efitra fandroana
Ho an'ny olona maro Ny tabataba dia mety ho iray amin'ireo olana ratsy indrindra. Mihoatra noho ny zava-drehetra satria indraindray ny efitra fandroana dia ao an-trano ary mety misy akony kokoa. Efa fantatsika fa amin'izany dia misy ihany koa ny milina fanasan-damba izay somary ambany noho ny mahazatra.
Ny toerana ao amin'ny efitra fandroana Mety ho olana ihany koa izany, toy ny fijinjana ao amin'ny faritry ny lakozia. Saingy rehefa mitranga izany dia tokony hisafidy milina fanasan-damba misy habe kokoa isika, raha azo atao.
ny teboka aesthetic Mety ho fihemorana ho an'ny olona maro izany. Marina fa ny fananana ny milina fanasan-damba ao amin'ny efitra fandroana dia tsy midika foana hoe 'mifanaraka' amin'ny haingon-trano hafa. Hatramin'ny imbetsaka dia somary terena.
Mazava ho azy fa tsy maintsy lazaina fa misy ihany koa ny hevitra maro izay afaka camouflage izany, raha tsy tianao ny vokatry ny appliance miala eo imasony. Araka ny mametraka karazana kabinetra misy varavarana, mitsangana mety ho iray amin'izy ireo. Koa eto ambany ny milina fanasan-damba ary eo amboniny talantalana maromaro hitehirizana ireo vokatra fanasan-damba ary koa harona maromaro na izay ilainao. Noho izany dia mila ny ampahany amin`ny efitra fandroana, toy ny zorony ary izany dia kely kokoa noho ny sakan`ny ny milina fanasan-damba mihitsy. Azonao atao ny mampifanaraka ny lokon'io fanaka io amin'ny ambiny amin'ny efitrano, mba hisian'ny firindrana ao amin'ny efitrano toy izany. Tsy toa hevitra tsara ve izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Ny milina fanasan-damba ao amin'ny efitra fandroana: ny tombony sy ny tsy fahampiana
Fanomezana fampakaram-bady ho an'ny mpivady
Ny tsy fahampian'ny faniriana ara-nofo eo amin'ny mpivady